Home Wararka AMISOM oo War degdega kasoo saartay Xasuuqii Golweyn
AMISOM oo War degdega kasoo saartay Xasuuqii Golweyn
AMISOM ayaa WAR SAXAAFADEED cusub kasoo saartay xasuuqii Golweyn ee askarta Uganda geysteen, waxaana qoraalka lagu caddeeyay inuu socdo baaritaan lasoo afjari doono 6-da September.
Kiiska ayaa gaaray dowlada Uganda oo Madaxweynaheeda uu dhowaan ka hadlay iyo Midowga Afrika oo baaritaanka qeyb ka noqoneysa, waxaana AMISOM ay caddeysay inay ka go’an inay baaritaan degdeg ah oo hufan ku samayso dhacdadii Golweyn.
HOOS KA AKHRISO WAR-SAXAAFADEEDKA AMISOM
“Anagoo daba socona Bayaankii ay AMISOM soo saartay Ogosto 11, 2021, ee ku saabsanaa dhacdadii ka dhacday Golweyn, halkaas oo ay ciidamada AMISOM ku weerareen hawl -wadeennada Al -Shabab iyagoo ku jiray roondo joogto ah, baaritaanno horudhac ah ayaa lagu ogaaday in toddobada qof ee la dilay aysan ka tirsanayn Al -Shabaab.
AMISOM ayaa baareysa wararka sheegaya in ciidamadooda ay mas’uul ka ahaayeen dhimashada toddobadaas qof. Hoggaankeena ayaa tan iyo markii ay dhacdadu la kulmay odayaasha, xubnaha bulshada iyo saraakiisha dowladda, una caddeeyay inaysan raali ka noqon doonin falal dambiyeedyada ka dhanka ah dadka rayidka ah ee ay askartooda geystaan. Waxay kaloo u xaqiijiyeen inay ka go’an tahay inay gartaan oo ciqaabaan kuwa jebiya xeerarka hawlgelinta.
Si loo baaro dhacdadan halista ah lagana taliyo tallaabooyinka dabagalka ah.
AMISOM waxaysameysay Guddi Baaritaan oo ka kooban toddoba xubnood, kuwaasoo isla markiiba bilaabay shaqadooda. Baaritaankan sharciga ah waxaa hoggaaminaya sarkaal sare iyo laba xubnood oo ka socda Guddiga Midowga Afrika ee Addis Ababa. Xubnaha kale waxaa ku jira sarkaal sare oo ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya, iyo sarkaal sare oo mid walba uu ka socdo Xarunta Militariga, Booliska iyo Xarunta Howlgalka AMISOM.
Hawlgalka AMISOM wuxuu si toos ah ula shaqeynayaa Dowladda Federaalka iyo qoysaska ay dhibaatadu saameysay, wuxuuna ballanqaadkiisa ku bixiyay baaritaan degdeg ah oo hufan, kaas oo la soo gabagabeyn doono 6 -da September, 2021.
Guddiga baarista ayaa dejin doona inta ay le’eg tahay mas’uuliyadda ciidamada AMISOM ee dhimashada toddobada iyo duruufaha ay ku dhacday. Guddigu wuxuu ku talin doonaa in magdhaw la siiyo qoysaska ay dhibaatadu saameysey haddii ay dhacdo in askarta AMISOM lagu helo dambi ayna soo jeediyaan talooyin si looga fogaado inay soo laabtaan falalkaasi.
Intaa waxaa dheer, Dowladda Uganda waxay u xaqiijisay hoggaanka Ergada in si hufnaan leh, haddii Guddigu uu caddeeyo inay hayaan caddeymo ku filan, Maxkamad ayaa la dhisi doonaa oo lagu qaadi doonaa Soomaaliya si loo maxkamadeeyo kuwa ku lugta leh.
AMISOM waxay u qaadaysaa hab sharci ah eedeymahan halista ah si waafaqsan hab -dhaqanka ugu wanaagsan ee caalamiga ah waxaana ka go’an inay sida ugu dhaqsaha badan u sameyso baaritaan dhab ah, la xisaabtamto cid kasta oo mas’uul ah una hoggaansanto dhammaan wixii ka soo baxay iyo talooyinka Baaritaanka.
Fahad Yasin oo si farsameysan usoo afjaray awooda siyaasadeed RW Rooble
Ciidamada Jubbaland oo howlgalo ka fuliyay deegaano ka tirsan G. Jubada Hoose
Ganacsato Soomaali oo laga soo masaafuriyay dalka Turkiga